किन हुन्छ बच्चामा औंला चुस्ने बानी ?
फागुन १८, २०७४ शुक्रवार १३:४९:००
काठमाडौँका रोशन तिवारीलाई सानोमा आैंला चुसेर निदाउने, खेल्ने बानी थियो । उनको औँला चुस्ने बानीले ठूलो रुप निम्त्याउला भनेर बाबुआमाले पनि सोचेका थिएनन् । स्कुल जान थालेपछि बानी हट्ला भनेर परिवारका सदस्यले त्यति महत्व दिएनन् । तर, स्कुल जान थालेपछि पनि बानी हट...
होलीको रंगले एलर्जीदेखि क्यान्सरसम्म (कुन रङमा के मिसावट, कस्तो असर?)
फागुन १७, २०७४ बिहिवार १८:२३:००
मित्रता, एकता तथा सद्भावरूपी रंगहरूको पावन पर्व होली खुसी आदानप्रदान गर्दै मनाइँदै छ । रंगीन जीवनमा रम्ने धेरै हुन्छन्, त्यही भएर धेरैले रंगको यस पर्वलाई महत्वका साथ लिने गरेका छन् । असत्यमाथि सत्यको विजय, शिवभक्त छोरा प्रह्लादलाई भष्म गर्ने उद्देश्यले अग्निमा नजल्ने वरदा...
होलीको रङले पार्ने असर र ध्यान दिनुपर्ने ८ कुरा
फागुन १७, २०७४ बिहिवार १२:५४:००
होलीमा खेल्ने रङ तीन प्रकारका हुन्छन्। एउटा पेस्टमा आउँछ, एउटा धूलो हुन्छ र एउटा पानीमा मिसाएर लगाउने हुन्छ। पेस्ट विभिन्न रङमा उपलब्ध हुन्छ। यस्ता रङमा विभिन्न रसायन हुन्छ, जसले छालामा मात्र नभई आँखा र मिर्गौलामा समेत गम्भीर असर पार्छ। धूलो रङमा मेटलहरु राखिएको हु...
होलीमा प्रयोग हुने रङले आँखामा कस्तो असर गर्छ? कसरी जोगिने?
फागुन १७, २०७४ बिहिवार १२:०४:००
आजकाल होलीमा विभिन्न थरीका रङको प्रयोग बढ्दो छ। होलीमा प्रयोग हुने यस्ता रङमा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रसायनहरु समेत हुन्छन्। त्यस्ता रसायनले आँखा बाहिरको एलर्जीदेखि आँखामा संक्रमणसम्मको समस्या उत्पन्न गराउँछ। रसायनयुक्त रङका कारण आँखाको नानीमा संक्रमण हुनुका साथै...
'विश्वमै दुर्लभ रेबिज' नेपालमा : डा शेरबहादुर पुन
फागुन १६, २०७४ बिहिवार ०३:२८:५८
रेबिज रोग दुई प्रकार हुन्छन्। पहिलो, क्लासिकल अथवा फिउरिअस र दोस्रो, प्यारालाइसिस गराउने रेबिज अथवा प्यारालाइटिक रेबिज। यी रेबिजका प्रकारहरु लक्षणका आधारमा पहिचान वा छुट्याउने गर्ने गरिन्छ। प्यारालाइटिक रेबिज अति दुर्लभ रेबिज हो। तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सबै र...
फागुन १६, २०७४ बुधवार १२:४९:००
स्तनका कोषहरू असामान्य रूपमा वृद्धि हुन थालेपछि स्तन क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ । साधारणतया कोषहरूको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकता अनुसार हुन्छ । तर, जब शीघ्र रूपमा र धेरै मात्रामा कोषहरू वृद्धि र विभाजन हुन्छन्, पुराना कोषहरू टाँसिएर रहन्छन् तब गिर्खा वा ...
फागुन १४, २०७४ सोमवार ११:५९:००
आमा र बच्चाको सम्बन्ध गर्भावस्थादेखि नै हुन्छ । शिशुको बाँच्ने र स्वस्थ रहने सम्भावना बच्चा गर्भमा रहेदेखि नै बच्चा र आमालाइ गरिने स्याहार र आहारमा भर पर्छ । नवजात शिशुमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति ज्यादै न्युन हुन्छ । आमाको दुधमा ल्याक्टोफोर्मिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, हर्मोन्स, ए...
महिलालार्इ मुटु रोगको जोखिम कति ? जोगिन तरिका के ? - डा अाेममूर्ति अनिल
फागुन १३, २०७४ सोमवार ०२:५४:००
ठूलो मुटु हुनु भनेको सामाजिक दृष्टिले उदार हुनु भनेर बुझिन्छ। कसैले निःस्वार्थ सेवा र सहयोग गरेको देख्यौँ भने हामी भन्छौँ, कस्तो ठूलो मुटु भएको मान्छे। तर चिकित्सा विज्ञानले भने ठूलो मुटुलाई राम्रो मान्दैन। बरु मुटु ठूलो हुँदै जानुलाई ‘काडिर्यो मिगेली’ ...
क्यान्सर रोगमा प्राकृतिक चिकित्सा र योगको स्थान
फागुन ११, २०७४ शुक्रवार १७:५३:००
क्यान्सर शब्द सुन्नेबित्तिकै हरेक मानिसको मनमा भय उत्पन्न हुन्छ । यसलाई निको नहुने तथा रोग लागेपछि मृत्यु अँगाल्नुपर्ने रोगका रुपमा आममानिसमा लिइन्छ । तर समयमै जीवनशैली परिवर्तन गरि प्राकृतिक चिकित्सा र योगलाई जोड्ने हो भने यस रोगबाट बच्न सकिन्छ र क्यान्सर भइसकेको अवस्थामा...
मिर्गौला सुन्निने कारण र उपचार
फागुन १०, २०७४ बिहिवार १९:०४:००
अधिकांस मानिसको शरीरमा दुई वटा मिर्गौला हुन्छ । तर कसैकसैमा जन्मजात एउटा मात्र मिर्गौला पनि हुनसक्छ । एउटा मात्र मिर्गौला हुनेको संख्या निकै कम हुन्छ । मिर्गौला झट्ट हेर्दा सिमी आकारको हुन्छ । मिर्गौलाको मुख्य काम शरिरमा उत्पन्न भएका विकारहरुलाई बाहिर फ्याँक्ने हो । मि...
पुरुषको पिसाबनलीमा हुने समस्या बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया : लक्षण र उपचार
फागुन १०, २०७४ बिहिवार १८:५६:५३
हड्डी कमजोर हुने रोग 'अस्टियोपोरोसिस' ? कसरी थाहा पाउने ?
फागुन १०, २०७४ बिहिवार १३:०९:००
अस्टियोपोरोसिस हाडमा देखिने रोग हो । अस्टियो भनेको हाड हो भने पोरस भनेको हाडको घनत्व कम हुन गएर कमजोर हुनु हो । त्यसकारण हाडमा देखिने कमजोरी अर्थात सामान्य अवस्थामा रहेको हड्डीको भित्री बनोटमा ठुला छिद्रहरु हुने समस्या नै अस्टियोपोरोसिस हो । सुक्ष्म रुपमा हड्डी नास ह...
बच्चाको आँखा ठिक छ छैन थाहा पाउने कसरी ?
फागुन १०, २०७४ बिहिवार ११:५९:००
किन हुन्छ ढाड दुख्ने समस्या ? के गर्ने/नगर्ने ?
फागुन ८, २०७४ मगलवार १२:११:००
हामीमध्ये धेरैलाई कहिलेकाहीँ ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ । यो कसैलाई कम हुन्छ भने कसैलाई बढी भएर औषधी नै खानुपर्ने अवस्था आउछ । चिकित्सककहाँ पुग्नेमध्ये अधिकांशको ढाड दुख्ने समस्या भएको पाइन्छ । यो पूरानो समस्या हो । कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिसको जीवनमा कुनै न कुनै बे...
श्रीमान् श्रीमतीबीच झगडा हुने एउटा यस्तो रोग
फागुन ६, २०७४ आइतवार १४:३१:००
हाइपोमेनिया यस्तो रोग हो, जसम मानिसको मन अस्थिर रहन्छ । यस्ता मानिस बढी बोलिरहनु पर्ने हुन्छन् । आफ्ना कुरामा जिद्धी गर्ने र भनेको नमान्ने अपशब्द बोल्ने, सानो कुरामा पनि बढी रिसाउने, मन सधैं चञ्चल रहने हुन्छ । यो रोग लागेको हो भनेर ठम्याउन गाह्रो नै हुन्छ । हाइ...
यसकारण उमेर पुगे पनि महिनावारी हुँदैन
फागुन ६, २०७४ आइतवार १३:४४:००
बालिकाबाट किशोरी अवस्थामा प्रवेश गरेको एउटा प्रमुख संकेत महिनावारी हो । तर कतिपयमा समयले नेटो काटिसकेपछि पनि महिनावारी सुरु भएको हुँदैन । किशोरीवस्था पूर्व, गर्भावस्थामा, सुत्केरी पश्चात् बच्चालाई राम्ररी स्तनपान गराइरहेको समय कतिपय परिवार नियोजन ...
पेटभित्रका रोग पहिचान गर्ने इण्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउण्ड के हो ?
फागुन ६, २०७४ आइतवार १२:२७:००
ग्याष्ट्राइटिसका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने, देखाउने र औषधि लिने गर्छन । त्यसमध्ये कतिपयको रोग निको हुन्छ भने कतिपयमा पुनः बल्झिने अवस्था देखा पर्छ । औषधि लिउञ्जेल ठीक हुने र सकिएपछि फेरि दुखाई सुरु हुने कारणले धेरै बिरामी पिरोलिएका छन् । पूर्ण रुपमा निको नहुनेहरू...
पाचन प्रणालीको दीर्घरोग ‘क्रोन्स’का १० लक्षण र उपचार
फागुन ४, २०७४ शुक्रवार १३:२२:००
फागुन ४, २०७४ शुक्रवार १२:०१:००
अधिकांशले दाँत ब्रस गर्दा रगत आउनुलाई सामान्य ठान्ने गरेको पाइन्छ। तर, हात खुटा धुँदा रगत नआएजस्तै दाँत ब्रस गर्दा पनि रगत आउनु हुँदैन। गिजाबाट रगत आउनु भनेको ‘पेरियोडेन्ट’ (गिजारोग) को पहिलो लक्षण हो। केही टोक्दा दाँतबाट रगत आउँछ भने त्यसलाई ‘इन्...
प्राइभेट पार्टमा के के रोग लाग्छ ? कसरी जोगिने ?
फागुन ३, २०७४ शुक्रवार ०२:४४:३८
पुरुष वा महिलाले आफ्नो ‘प्राइभेट पार्ट’ अर्थात् यौनअंगमा लागेका रोग तथा समस्यालाई सकेसम्म लुकाउने गर्छन् । चिकित्सकीय अभ्यासका क्रममा यौनरोग लुकाएर गम्भीर अवस्थामा मात्र अस्पताल आइपुगेका धेरै बिरामी भेटिएका छन् । यौन रोगलाई लाजका कारण लुकाउँदा जीवन नै बर्बाद...